Iikhosi zeBIM zoLwakhiwo - i-Geofumadas
Iikhosi zeBIM zoBume
#BIM-Uyilo lwensimbi ephambili
Funda uyilo lolwakhiwo usebenzisa isoftware yoyilo lwentsimbi. Yila Isiseko esigqibeleleyo sokwakha, iikholam zoLwakhiwo, iinkcukacha zoCwangciso loLwakhiwo kunye noyilo Umhlohli ucacisa iinkalo zokutolikwa kwemizobo yobume nokuba zinokwenziwa njani kwimodeli emacala mathathu. Icacisa indlela yokuyila iiplani zokuprinta kwaye uqonde kancinci ...
Izifundo ze-BIM Iikhosi zeBIM zoBume Iikhosi zokuhlaziya
#BIM-Ikhosi yoBunjineli boLwakhiwo usebenzisa iRevit
Isikhokelo soyilo olusebenzayo kunye neModeli yoLwakhiwo loLwakhiwo ejolise kuyilo loyilo. Zoba, uyile kwaye ubhale amaxwebhu ezakhiwo zakho ngeRVIT Ngenisa umhlaba wokuyila nge-BIM (Imodeli yoLwazi lweeModeli zoKwakha) Yenza izixhobo zokuzoba ezinamandla Yenza itemplates zakho Thumela kwiinkqubo zokubala Yenza kunye nezicwangciso zamaxwebhu ...
#CODE-Ikhosi yeDynamo yeeprojekthi zobunjineli zeBIM
Uyilo lwe-BIM uyilo lwezixhobo zekhompyuter Le khosi inobuhlobo kunye nesingeniso kwisikhokelo sehlabathi loyilo lokusetyenziswa komdibaniso usebenzisa i-Dynamo, indawo yokubonwa kwenkqubo yokubonakalayo yabaqulunqi. Ukuqhubela phambili, kuphuhliswa ngeeprojekthi apho kufundiswa iingqondo ezisisiseko zenkqubo yokubonwayo. Phakathi kwezihloko esiya kuphatha umsebenzi ngejometri ...
Izifundo ze-BIM Iikhosi zeBIM zoBume Iikhosi zokuhamba komsebenzi
#CODE-Intshayelelo yoYilo yeKhosi usebenzisa i-Ansys workbench
Isikhokelo esisisiseko sokwenza into yokulinganisa ngaphakathi kwinkqubo yokuphononongwa kwezinto ezincinci. Iinjineli ezingaphezulu nangaphezulu zisebenzisa iiModelers eziQinileyo kunye neendlela ezinobuncinci zokucombulula iingxaki zemihla ngemihla zoxinzelelo, ukusilela, ukuhambisa ubushushu, ukuphuma kwamanzi, umbane, phakathi kwabanye. Le khosi ihambisa ingqokelela yeeklasi ezenzelwe ...
#BIM - Ikhosi ye-ETABS yoBunjineli boLwakhiwo-Inqanaba 2
Uhlalutyo kunye noyilo lwezakhiwo ezichasene nenyikima: isoftware ye-CSI ETABS Injongo yesifundo kukubonelela abathathi-nxaxheba ngezixhobo ezisisiseko nezingaphambi kwenkqubo yokumodareyitha, uyilo lwezinto ezisakhiweyo luya kufikelelwa, ukongeza isakhiwo siza kuhlaziywa. kuxhomekeke kwizicwangciso ezinenkcukacha, kusetyenziswa ...
Izifundo ze-BIM Iikhosi zeBIM zoBume Izifundo ze-ETABS
#BIM-Ikhosi yeNzululwazi kubuGcisa boLwakhiwo nge-ETABS
Iikhonsepthi ezisisiseko zezakhiwo zekhonkrithi, kusetyenziswa i-ETABS Injongo yesifundo kukubonelela abathathi-nxaxheba ngezixhobo ezisisiseko nezingaphambi kwenkqubo yokumodareyitha, hayi nje uyilo lokufumana izinto zokwakha luye lwafikelelwa, isakhiwo siza kuphinda sihlalutywe ku umsebenzi wezicwangciso ezineenkcukacha, kusetyenziswa…
#BIM - Ikhosi yeProjekthi yoLwakhiwo (iSakhiwo soHlaziyo + iRobhothi + yintsimbi)
Funda ukusebenzisa uVuselelo, ukuHlaliswa koLwakhiwo lweRobhothi kunye neNtsimbi ye-Advance yoyilo loyilo lwezakhiwo. Zoba, uyilo kwaye ubhale iiprojekthi zakho zesakhiwo nge-VIVELA Faka intsimi yoyilo nge-BIM (Imodeli yolwazi yeModeli) Ukwakha izixhobo zokuzoba ezinamandla Yenza itemplates zakho Thumela kwiinkqubo zokubala Yenza kunye nokubhala ...
#BIM - Ikhosi ye-ETABS yoBunjineli boLwakhiwo-Inqanaba 1
Uhlalutyo kunye noyilo lwezakhiwo - Inqanaba le-Zero kwinqanaba elihambileyo. Injongo yesifundo kukubonelela abathathi-nxaxheba ngezixhobo ezisisiseko nezizihambileyo zenkqubo yokumodareyitha, ayizukuphela ukuba uyilo lwezinto ezizizo zesakhiwo luya kufikelelwa, isakhiwo siza kuphinda sihlalutywe kusekwe kwizicwangciso ezineenkcukacha, ...